सुपर मुन हेर्ने होइन त ? - E Net Nepal
Home Social News सुपर मुन हेर्ने होइन त ?
सुपर मुन हेर्ने होइन त ?
९ असार । आइतबार साँझ चन्द्रमा पृथ्वीको नजीक आउने भएकाले अरु समयकोभन्दा केही ठूलो र चम्किलो देखिँदै छ ।
पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिक आउने भएकाले आज साँझ र रातको समयमा चन्द्रमा केही फरक देखिने छ । चन्द्रमा आफ्नै बाटोमा हिँडिरहेका बेला वर्षमा एक पटक पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आइपुग्छ ।
यही बेला चन्द्रमाको आकार केही ठूलो र अझ चक्किलो देखिने भएकाले यो अवस्थालाई पाश्चात्य समाजमा सुपर मुन भनिन्छ । यो अवस्थालाई नेपाली समाजमा पूर्णिमा झरिलो चन्द्रमा भन्ने चलन छ ।
औसतमा ३ लाख ८४ हजार किलोमिटर टाढा रहने चन्द्रमा यो बेला पृथ्वीबाट ३ लाख ५६ हजार ९ सय ९१ किलामिटरमात्र टाढा हुने खगोलविद्हरुको भनाइ छ । चन्द्रमा र पृथ्वीको दुरी घट्ने भएकाले चन्द्रमा उदाएको र अस्ताएका बेला केही ठूलो आकारमा देखिने वरिष्ठ खगोलविद् जयन्त आचार्यले बताउनुभयो । समुद्र किनारबाट हेर्ने हो भने आजको चन्द्रमा झनै आकर्षक देखिने र अन्य स्थानबाट खुला आँखाबाट हेर्दा पनि खासै फरक नपर्ने खगोलबिदहरुको भनाई छ ।